Wax Uraya WordPress Qiimaynta & Qiimaynta Muuqaalada WordPress | Martech Zone
Wax Uraya WordPress Qiimaynta & Dib u eegista Plugin WordPress
Isniin, November 2, 2015 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Ku biirinta dhaqdhaqaaqa isha furan waxay noqon kartaa wax la yaab leh, laakiin toddobaadkan kamuu mid ahayn waqtiyadaas. Waxaan ku soo kordhinay bulshada WordPress toban sano hadda. Waxaan dhignay waxyaabo badan oo fiilooyin ah. Qaarkood waa hawlgab noqdeen, qaar kalena waxay leeyihiin soo-gaadhis aan caadi ahayn. Kuweena Sawirka Rotator Widget plugin, tusaale ahaan, waxaa laga soo dejiyey in ka badan 120,000 jeer wuxuuna ku shaqeeyaa in ka badan 10,000 oo boggaga WordPress ah.
Hal qalab oo aan boqolaal saacadood ku maalgashanay ayaa ah Wareeg Press, plugin warsidaha emailka waxaan u soo saarnay WordPress. Fidinta waa mid xariif ah, u ogolaaneysa wakaaladaha inay dhisaan emayl sida ay u sameysan lahaayeen bogga theme laakiin u diraan emaylka adoo adeegsanaya adeegeena si aan u maareyn karno raadinta gujinta, maaraynta boodhka, macaamiisha, iyo rukhsadaha. Waxay qaadatay xoogaa ka mid ah shaqada kaabayaasha si tan loo gaaro, laakiin waxaan ku jirnaa muddada dheer. Waxaan aaminsanahay in isticmaaleyaasha WordPress ay tahay inay lahaadaan barxad emayl u gaar ah oo si fudud loo isticmaali karo.
Intii aan kor u qaadeyno barxadda, qofna kamaan eedayn isticmaalkiisa - qabow haddaad i weydiiso. Diiwaangelintu waxay bixinaysaa nooc bilaash ah haddii aad dirto wax ka yar 100 emayl bishiiba, laakiin waan sii dheereynay intaan u beddeleyno nidaamka lacag-bixinta WooCommerce oo ka shaqee dejinta madal si ay ugu fududaato dadka isticmaala.
Si layaab leh, waxaan ku helnay dib-u-eegis 1-xiddig ah oo ku soo kordhay barta Plugin. Isla markiiba waxaan ku xoqay si aan u arko waxa khaldan:
Marka user isticmaalehan waligiis isma uusan saxeexin laakiin wuxuu dhahay kuwaa looga shakisan yahay habka diiwaangelintayada. Waan la yaabay illaa iyo intii aannu runti ha codsan macluumaadka kaarka deynta. Wuu ogaan lahaa taas haddii uu dhammaystiro hawsha diiwaangelinta, laakiin ma uusan samayn.
Waxaan u maleynayay in tani ay cadaalad darro tahay oo ku soo koobi lahayd dareenka Automattic, oo qoraya qofkooda Taageerada Plugin:
Jawaabta aan helay waxay ka naxdin badnayd dib u eegista lafteeda. Dib iyo gadaal ayaan ulasocday shaqaalihii Automattic oo oranaya in boggayagu umuuqday har maxaa yeelay qiimeyn laguma qorin si guud. Hadh
Waxaan xusuusiyay inaan annagu HA WEYDIIN KAARKA CARRUURTA macluumaad ka hor inta aanad qofka u soo bandhigin qiimeyn. Xitaa markaa markaa WELIGEY AANAN DHAQAN ku dallicin kuwa hore ee aan korsano. Weligaa ma iska diiwaangelisay adeeg aan wax lacag ah ku fadhiyin? Waan hubaa inaad haysato… WordPress waxay codsaneysaa diiwaangelin iyadoon wax macluumaad ah oo qiimeyn ah laga helin adeegyada dheeriga ah. Hadh
Aan xuso in Bogga qiimeynta waxaa lagu xusay Su'aalaha la Weydiiyo of our plugin. Dhanka kale, waxaan daabacay bogga qiimaha liiskayaga ku jira si aan cidna ugu jahwareerin, laakiin haddana codsaday in dib-u-eegista laga saaro. Jawaabta:
Marka, si kale haddii loo dhigo, qof qirtay runti waligood ma adeegsan adeeggayaga waxaa loo oggol yahay inuu ku qiimeeyo adeegeena dib u eegis 1-xiddigle ah. Maaddaama aan ka shaqeyneyno sidii aan u caawin lahayn bulshada il furan oo aan u bixinno xal aad u jaban, ma hubo sida ay tan u caawinayso qofna. Tani asal ahaan waa dib-u-eegis faallo ah - qoraagu wuxuu si buuxda u qirayaa inuusan waligiis saxiixin ama uusan adeegsan adeeggayaga.
Waxaan dareemi lahaa si ka duwan sidii hore ee uu qiimeyuhu ku qori lahaa oo noogu qiimeyn lahaa awoodaha qalabka - xitaa isagoo intaa raaciyay inuu jeclaan lahaa in sicirka uu ku yaal goobta ay fiicnaan lahayd Laakiin dib u eegis 1-xidig ah oo loogu talagalay wax uusan waligiis isticmaalin waa cudurdaar la'aan.
Cusboonaysii 11/2: Hadda waxaan ahay cadhoodaa, a madax kulul, macquul ahayn, a li'I, waalan, Iyo aan macquul ahayn maxaa yeelay waan ka xumahay in qof aan waligiis isticmaalin qalabka wax lagu shubto uu siiyay dib u eegis 1-xiddig ah, waxaa meesha ka baxay in adeeggayagu aanu daacad ahayn, iyo in qof kasta oo diiwaangashan yahay doqon. Adeegga ay waligood isqorteen.
E-maylkaygu wuu hooseeyay, jawaabtooda ayaa kor ku taal.
Waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aan sameyn lahaa waxa kale ee horumariyayaasha fiilooyinka sameeya taas Matt iyo kooxda ka socota WordPress ma qadariyo, oo waxay dhaafaan ku deeqa waqti kasta iyo dadaal kasta oo ay dib ugu soo celiyaan WordPress oo kaliya waxay bilaabaan inay ku iibiyaan shebekado boggeyga. Waa iska cadahay inaysan dan ka laheyn dadka taageera barnaamijkooda.
Cusboonaysii 11/3: Maanta, kooxda mutadawiciinta ah ee WordPress waxay go'aansadeen inaan u baahanahay waxbarasho ku saabsan suuqgeynta waxayna igula taliyeen inaan noqdo ninka ugu fiican. E-maylkaygu wuu hooseeyay, jawaabtooda ayaa kor ku taal.
Tags: Mike Epsteinqiimeynta plugin wordpressplugins WordPressdib u eegista qiimeynta wordpress
Sida Loogu Dhex Jiro Suuqgeynta Mawduucaaga
Nov 3, 2015 at 9: 58 AM
Waan kugu raacsanahay adiga iyo nidaamka dib u eegistu wuxuu u socdaa sida lataliyaha safarka. Ma jiro siyaasad hubin tayo leh oo ku saabsan nidaamka dib u eegista laakiin dib u eegista waxaa loo isticmaalaa goob iib ahaan xitaa alaabada / adeegyada aan u shaqeyn sida ay yiraahdaan ama jabiya siyaasadda rukhsadda. Tani waa cadaalad daro mana ahan xirfad. Waxa kale oo jira nidaamyo dib u eegis dibadeed / qiimeyn dibadeed laakiin waad diidi kartaa qiimeynta hoose.
Anigu ma aaminsani qiimeynta / dib u eegista maxaa yeelay ma maamusho cid saddexaad oo aan dan ka lahayn mana haystaan ​​wax shahaadooyin nidaam ah (sida iso ama wixii la mid ah).
Sidoo kale ma aaminsani wax badan suuqyada sida envato ama wax la mid ah. Waagii hore waxaan soo gudbiyay qaar ka mid ah raadadka (aniguba waxaan ahay muusikiiste) weligoodna lama aqbalin. Hadda waxaan u qorayaa muusikada shirkadaha filimada qaarkood.
Nov 3, 2015 at 11: 56 AM
Waxaa jira nidaamyo qaar oo runti shaqo fiican ka qabta dhexdhexaadinta. Liiska Angie, tusaale ahaan, wuxuu siiyaa qandaraaslaha fursad uu wax ku saxo oo markii si wadajir ah loogu heshiiyo lagu qanco, dib u eegista xun waa la beddeli karaa. Waa wax laga xumaado in dib u eegistani ay taagnaato - wax qiimo ah ma siiso bulshada oo waxay dhaawici kartaa oo keliya korsashada 'plugin'.
Nov 4, 2015 saacadu markay tahay 10:06 PM
Kaalay dhinaca mugdiga oo isku duub awoodda CMS-da ganacsi, Doug! 🙂
Dadka xanaaqa badan kuma koobna bulshada il furan.